Media Advisory for Myanmar- Netherlands Foreign Ministers’ Joint Press – Ministry of Foreign Affairs
Media Advisory for Myanmar- Netherlands Foreign Ministers’ Joint Press
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Bert Koenders ၏ ခရီးစဥ်အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည့် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအကြား ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
၁။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Bert Koenders သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ လာရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ခရီးစဉ်အတွင်းနှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှစ်ဦးတို့သည် ၁၂-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့ (၀၉း၄၅) နာရီအချိန်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရန် ရှိပါသည်။ တွေ့ဆုံမှုအပြီး (၁၀း၃၀) နာရီတွင် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့သည် ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကျင်းပရာတွင် ဦးစွာ ဝန်ကြီးနှစ်ဦးက (၄-၅) မိနစ်ခန့်စီ ဦးစွာရှင်းလင်းပြောကြားမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းနောက် အမေး၊ အဖြေကဏ္ဍကို ဆက်လက် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အမေးအဖြေကဏ္ဍတွင် အချိန်ကန့်သတ်မှုကြောင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှစ်ဦးတို့အနေဖြင့် မြန်မာမီဒီယာဘက်မှ (၂)ဦး၊ နယ်သာလန်မီဒီယာဘက်မှ (၂) ဦး၊ တစ်ဦးလျှင် မေးခွန်း (၁) ခုစီဖြင့် စုစုပေါင်းမေးခွန်း (၄) ခုကို ဖြေကြားသွားရန်ရှိပါသည်။ မေးခွန်းများကို တိုတိုနှင့်လိုရင်း မေးမြန်းကြရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၄။ ယခုခရီးစဥ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံတို့အကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပေးအပ်လျက်ရှိသော ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများနှင့် ဘက်စုံ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး စသည့်ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးသွားဖွယ်ရှိပါသည်။